मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिकमनिस्ट धङधङीमा लोकतन्त्रको सत्यानाश !
खै के गर्नु नगर्नु ? कन्टिर–बाबू लोकतन्त्र पूरै धरापमा परेको देख्दै छन् । तर यसलाई जोगाउनेवाला कोही देखिरहेका छैनन् ।
आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा हुँ भन्नेहरू लाचार देखिन्छन् । उनीहरूको लाचारी बुझिनसक्नुको छ । रह्यो कमनिस्टहरूको कुरा, उनीहरू त झन् लोकतन्त्रको खोल ओडेर एक दलीय घ्यू खान पल्केका प्रजातिहरू भइगए ।
त्यसमाथि ओल्बा सबैखाले कमनिस्ट धङधङीलाई घुमाउँदै खेलाउने भेट्रान भएकोमा कुनै शङ्का बाँकी छैन । न सदन न लोकतन्त्र, जुनसुकै पोस्टमा जतिखेर मन लाग्यो उतिखेर गोल हानिरहेका हुन्छन् ओल्बा । समय र नियमको कुनै परवाह छैन ।
हुँदाहुँदा हाम्रा महान् ओल्बा राजपा भन्ने पार्टीको स्टेयरिङ पनि आफैँ सम्हाल्ने मुडमा देखिएका छन् । सार एउटै हो, लोकतन्त्रको सत्यानाश !
त्यसो त विद्वान विश्लेषकहरू कमनिस्टको चरित्र नै बडो विचित्रको हुन्छ भन्छन् । अर्काको अन्तरविरोधमा खेल्न खोज्ने कमनिस्टहरू आफैँभित्र पनि खेल्न पछि पर्दैनन् । निजी स्वार्थपूर्तिका लागि एउटै व्यक्तिको कुनै बेला देवत्वकरण र कुनै बेला दानवीकरण गर्न कमनिस्टमा परहेज गरिन्न ।
एक जना अग्रज पत्रकार परशु घिमिरेको टिप्पणी सापट लिएर कन्टिर–बाबू स्मरण गर्छन्– कुनै बेला नेकपा एमाले विभाजित भई नेकपा माले बनेको थियो । त्यस पार्टीका नेता थिए– बामदेव गौतम । उनलाई एमालेमा बाँकी रहेका नेताहरूले खुलामञ्चबाट एक नम्बरको भ्रष्टाचारी घोषणा गरेका थिए । पछि उनै गौतम पुनः एमाले भित्रिए, तर कसैले हिम्मत गरेन उनको बारेमा टिप्पणी गर्न ।
कन्टिर–बाबू थप्छन्– बरु सार्वजनिक भ्रष्टाचारी घोषणा गरिएका गौतम एमालेका लागि अनिवार्य ‘शक्ति’ ठहरिए । यो कमनिस्ट चरित्रमा नेपाली संस्करणको एउटा उदाहरण मात्र हो ।
एउटा अर्काे सार्वजनिक उदाहरण चिनियाँ कमनिस्टहरूका बारेमा दिने गरिन्छ । चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिताका माओकी पत्नी चियाङ चिङ निकै शक्तिशाली मानिन्थिन् । माओको अवसानपछि उनका उत्तरधिकारी राष्ट्रपति भएकै बेला चिङ गिरफ्तार भइन् । पछि जेलमा (अस्पतालमा घाँटीको क्यान्सर उपचार गर्ने क्रममा) आत्महत्या गरिन् । किन ? यो प्रश्नको औपचारिक जबाफ कन्टिर–बाबूसँग छैन । तर अनुमान गर्न असहज पनि छैन ।
कन्टिर–बाबू भन्छन्– यी त केही उदाहरणमात्र हुन् । कम्युनिस्ट भनिएकाहरूको मूल प्रवृत्ति उस्तै हो । सुनसरीका सुदन सदाजस्ता सच्चा कमनिस्ट कमरेडहरू प्रति भने कन्टिर–बाबूको सधैँ सम्मान छ ।
कमनिस्ट प्रवृत्ति लोकतन्त्र